Xisbiga Wadajir oo ka soo horjeestay xilka qaadista Ra’iisul Wasaare Kheyre – Kalfadhi
Xisbiga mucaaradka Wadajir ee uu hoggaamiyo Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, ayaa sheegay in si xooggan uu u diidanyahay xil ka qaadista Ra’iisul Wasaaraha, xil ka qaadistaasina waxaa uu ku sheegay sharci-darro.
Xisbiga Wadajir ayaa waxa uu ku macneeyay ujeedka xilka qaadista inay tahay mid lagu carqaladaynayo ka miradhalinta natiijada shirka Dhuusamareeb. Golaha Baarlamaanka uu ku eedeyay in uusan u marin hab-raac dastuurka waafaqsan.
Sidoo kale, Xisbiga Wadajir ayaa ku baaqay in lagu gacan siiyo xukuumada inay ka miro dhaliso natiijada shirka Dhuusamareeb. Ugu dambeyntii xibsiga Wadajir ayaa ka digey in muddo korosi uu ka dhaco dalka.
Dhinaca kale, Madasha Xisbiyada Qaran ee dalka ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista xukuumada uu madaxda ka ahaa Xasan Cali Kheyre inay tahay mid bilow u ah Muddo Korosi.
Halkan ka akhriso war-saxaafadeedka
Madasha Xisbiyada Qaran oo ku tilmaamay xilka qaadista Kheyre bilowga muddo korosi
Madaxweyne Farmaajo oo sii socodsiinta howlaha Golaha Xukuumadda u igmaday kusimaha Ra’iisal wasaaraha